नेपाल आज | भारतले चिनियाँ एपमा प्रतिबन्ध लगाएपछि के गर्दैछ चीन ?
भारतले चिनियाँ एपमा प्रतिबन्ध लगाएपछि के गर्दैछ चीन ?
बिहिबार, १५ साउन २०७७ गते प्रकाशित - नेपाल आज
भारतले यसअघि टिकटकसहितका ५९ एपमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । प्रतिबन्ध लगाएसँग चिनियाँ एप प्रयोग गरिरहेका भारतीय र दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरुको सञ्चा र सम्बन्ध विच्छेद भयो । उनीहरुले सञ्चा र सम्बन्धमा पुन: जोडिनका लागि विच्याटमार्फत वैकल्पिक सम्पर्क सुत्रको जानकारी गराए । प्रतिबन्ध लगाएको विच्याटमा राखिएको एक पोस्ट यस्तो थियो यदि भारतले वास्तवमै विच्याट्मा प्रतिबन्ध लगायो भने तपाईंले मलाई एलिपेमा भेट्न सक्नुहुन्छ ।
भारतले प्रतिबन्धको घोषणा गरेको केही दिनमै गुगल प्लेस्टोर र एप्पल प्लेस्टोरले सबै ५९ वटै एपहरु हटायो । जसमा १० करोड भारतीयहरुले प्रयोग गरिरहेको टिकटकलाईसमेत प्लेस्टोरले भारतका लागि हटायो । यससँगै टिनसेन्ट्स, विच्याट, सिना, विबो, बाइडु र अलिबाबा युसी ब्राउजर लगायत थिए । उक्त प्रतिबन्धले प्रयोगकर्तालाई वैकल्पिक उपाय सोच्न मात्र बाध्य पारेन कि चिनियाँ टेक कम्पनीहरुलाई पनि वैकल्पिक माध्यमका बारेमा पुनर्विचार गर्न बाध्य बनायो । चीन १.३९ बिलियनपछिको सर्वाधिक १.३५ बिलियन जनसंख्या भएको भारतमा चिनियाँ एपहरु प्रतिबन्ध हुँदा चिनियाँ टेक कम्पनीहरुले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्यो ।
भारत र इन्डोनेसियाका युवाहरुबीच चिनियाँ टेक कम्पनीका उत्पादनहरु निकै लोकप्रिय थिए । चीन-भारतबीच जुन १५ को राति पूर्वी लद्दाखको गलवान भ्यालीमा हिंसात्मक झडप भएपछि भारतले उक्त झडपको प्रतिकारस्वरुप चिनियाँ एपहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको थियो । हाल चिनियाँ कम्पनीहरुले वैकल्पिक एपहरुको बारेमा पुनर्विचार गर्दै भारतीय बजारलाई फेरि हातमा लिने रणनीति बनाइरहेका छन् । जुन १५ मा भएको झडपमा २० भारतीय सेना मारिएका थिए भने चीनले आफ्नोतर्फ मारिएका सेनाको बारेमा सार्वजनिक गरेको थिएन ।
चीनले आफूलाई हराउन चाहेको भन्दै ट्रम्पले भने - निर्वाचनको ठूलो खतरा चीन